Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonka Ka Socday Faransiiska oo Khasaare Dhaliyay.
Kacdoonka Ka Socday Faransiiska oo Khasaare Dhaliyay.
Caasimada dalka Faransiiska ee Paris ayey shalay markale ka dhaceen mudaharaadyo rabshado wata oo khasaaro soo gaadhsiiyey qaybo kamid ah suuqyada caanka ah ee magaaladaasi.
Banaanbaxyaashan ayaa markii hore ka cabanayey qorshaha xukuumada Faransiiska ay dooneyso inay sare u qaado canshuurta shidaalka marka la gaaro sanadka cusub. Madaxweynaha dalka France Macron ayaa lagu wadaa in maanta uu shacabka kala hadlo warbaahinta, kadib banaanbaxyadii rabshadaha watay ee todobaadyadan ka socday magaalada caasimada ah ee Paris iyo magaalooyinka waaweyn.
Dowlada ayaa rabshadaha ku eedaysay kooxaha xagjirta fog ee garabyada midig iyo shuuciyiinta oo ay sheegeen inay doonayaan in banaanbaxan u adeegsadaan qorshahooda ka dhanka ah dowlada xilka heysa. In ka badan 1000 qof oo kamid ahaa banaanbaxyaasha ayaa Sabtidii xabsiga la dhigay.
Madaxweyne Macron ayaa Jimcihii isugu yeedhay Guddoomiyayaasha degmooyinka waaweyn ee dalkaasi si uu wadatashi ula sameeyo, waxayna warbixin kasiiyeen kacdoonka xiligan ka socda dalka iyo qaabka ugu haboon ee lagu wajihi karo. Macada waxa uu Macron ku qancin doono shacabka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay Madaxweynaha France laga waayey dhanka warbaahinta.